Gudiga Mashaariicda Degmada Dhanaan Oo La Wareegay Mashaariicihii - Cakaara News
Gudiga Mashaariicda Degmada Dhanaan Oo La Wareegay Mashaariicihii
Dhanaan( cakaaranews )22ka March 2016, dhismaha Mashaariico cusub oo isugujira dhismo -iskuulo cusub, biyo-xidheeno iyo waliba dayactir ladayactiray barkado-biyo kuwaaso shaqadoodu kasocotay Degmada dhanaan ayaa lasoo gabagabeeyay islamarkaana ay lawareegeen gudigii mashaariicda degmada Dhanaan.
Hadaba Kusimaha Gudomiyaha Degmada Dhanaan mudane Maxamed Aadan Daahir iyo Madaxa Arimaha Xisbiga Degmada mudane Xaasan Bashir oo u waramay shabakada cakaaranews ayaa sheegay in ay dhamaystirmeen mashaariicaha kala ah 4 iskuul oo ay 2bo kamid ahi dhismo cusub yihiin laganadhisay tuulooyinka kala ah Kali iyo Shiniile. meesha 2da kalana ay ahaayeen balaadhin iskuul oo lagu daray iskuulka kuyaala qabalaha Cowleey iyo sidookale dugsiga Gamaadiid ee kuyaala magaalada dhanaan.
Dhanka kale waxay masuuliyiintu xuseen in ladayctiray barkad-biyo oo kutaala tuulada Cawleey iyo waliba dayctirka xafiisyadii hore ee SERP ee kuyaala magaalada.
Sidookale waxay sheegeen in iyana la dhamaystiray dhismaha Rug-Caafimaad oo laga hirgaliyay qabalaha Lammu iyo waliba dhismaha biyo-xidheen laga dhisay Laagta Ooman ee ay bulshda dhanaan kunaanaysaan hadhcad ayay timaadaa iyada oo socota oo oodaheedii wadata.
Ugudanbayna Waxay masuuliyintu tilmaameen in dhamaan mashaariicahan laga dhisay degmada ay si sharci ah ulawareegeen gudigii mashaariicda degmadu, iyagoo kala wareegay shirkadihii iyo iskaashatooyinkii qaatay dhismaha qandaraaskooda.